७ गल्तिहरु जसले मधुमेह वा डायबिटिज लगाउँछ र ७ खाना जसले हटाउँछ, जानी राखौँ – ताजा समाचार
७ गल्तिहरु जसले मधुमेह वा डायबिटिज लगाउँछ र ७ खाना जसले हटाउँछ, जानी राखौँ
मधुमेह किन हुन्छ ? भनेर कसैले सोधे, कुनै पनि विज्ञसँग यसको एउटा मात्र जवाफ छैन किनभने निकै धेरै कारणहरुे गर्दा मधुमेह हुन्छ । खासगरी अस्वस्थ्य खानपान र अस्तव्यस्त जीवनशैली हुनु मधुमेह रोग हुनुको मुल कारण हो । हामी जीवनयापनका क्रममा कति गल्ती गरिरहेका हुन्छौ, जसले मधुमेहको जोखिममा पार्छ । यहाँ हामी त्यस्तै दैनिक जीवनमा गरिने ७ गल्तिहरुका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ जसले मधुमेह गराउँछ । यी सात गल्तिहरुका कारणले हुने मधुमेह रोक्न खानु पर्ने ७ खानाको बारेमा पनि हामी यसमै चर्चा गर्नेछौँ ।
यी त भए ७ सामान्य गल्तिहरु जसका कारण मानिसहरुलाई मधुमेहको शिकार बन्न पर्छ । तथ्याकंलाई आधार मान्ने हो भने मधुमेहका पीडितमध्ये अधिकांश टाइप–टू डायबेटिजबाट ग्रस्त हुन्छन् । यस्तो मधुमेह भएका व्यक्तिको शरीरमा इन्सुलिन उत्पादन त हुन्छ, तर यो पर्याप्त हुँदैन । यसैले टाइप २ डायबेटिजका पिडितहरुले यी चिज नियमित खाने गरेमा चिनीकोे मात्रालाई सामान्य अवस्थामा ल्याउन सकिएका उदाहरणहरु छन् ।
जामुनामा जाम्बोलाइन नाम गरेको ग्लुकोसाइड पाइन्छ, जसले शरीरभित्र चिनी उत्पादन हुने क्रमलाई कम गरिदिन्छ । जामुनको दाना सुकाई यसको धुलो बनाउन सकिन्छ र एक चम्चा धुलोलाई दूध, पानी अथवा दहीसँग मिसाएर खाइयो भने रगत र पिसाबमा चिनीको मात्रा कम हुँदै जान्छ ।
६. आँपको पात
७. अन्य खाना
यो जानकारी सेयर गरेर सकेसम्म धेरैसम्म पुर्याउँन हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् । हामीले दिएको जानकारीले संसारमा एक जनामात्रै पनि स्वस्थ भए अरु के चाहियो ? तपाई पनि हरेक दिन पसिना निस्किने गरि कसरत गर्नुहोस् । कसरत गर्न सक्नुहुन्न भने दिनमा कम्तिमा ४५ मिनेट दुइहात हल्लाएर हिड्नुहोस् र दिनभरीमा अलि अलि गर्दै ३ लिटर पानी पिउँनुहोस् । स्वस्थ हुनुहोस् ।
प्रकाशित भएको : January 5th, 2020